ए चितवनकी सरकारी जागिरे शारदा, एकैचोटि कति जनासँग बिहे गर्न सकेकी नानी ! – Kavrepati
Home / समाचार / ए चितवनकी सरकारी जागिरे शारदा, एकैचोटि कति जनासँग बिहे गर्न सकेकी नानी !
admin May 29, 2021	समाचार Leaveacomment 346 Views
हरी गजुरेल – विवाहजस्तो पवित्र नाता सम्बन्धलाई पत्रुहरूले कसरी पैसा कमाउने माध्यम बनाउँछन् ? यस्तै केही पात्रका कारण एकबारको जीवन कष्टकर ढंगले झेलिरहेका रिटायर्ड (०६६ सालमा) उपसचिव हुन् भीमलाल लामिछाने । पोखरा मूल घर भएका लामिछाने तीन छोरा र दुई छोरीका पिता, जेठी श्रीमती बाउँठिएर हिँडेपछि एक्लै जीवनको रथ काटिरहेका थिए । ०५० सालमै जेठी श्रीमती अंश लिएर अलग भइन् । १७ वर्षसम्म एक्लै बस्दै आएका उनीहरूको सम्बन्धमा ०६३ साल साउनबाट कानुनी रूपमै पूणर्विराम लाग्यो । छोरा-बुहारी अलग, श्रीमती अलग हुँदा बुढेसकालमा गाह्रो-साह्रो पर्दा, बिरामी हुँदा कोही साथै भइदिए त हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो ।
२७ वर्षदेखि जीवनको रथ एक्लै गुडाइरहेका उनीसँग ठोक्किन आइपुगिन् चितवनकी शारदा पौडेल, संविधानसभा सदस्य, नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट । उनैले कल्पना डौलियाको नाम लिँदै भनिन्, ‘तपाइ डिभोर्सी, कल्पना पनि डिभोर्सी । डिभोर्सी डिर्भोसीको जोडी क्या सुहाउँछ, विवाह गर्नुस् ।’
नेताले भनेको पत्याएर विवाह गरे कल्पनासँग झण्डै तीन लाख खर्चेर । कल्पना गरेका थिए, कल्पनासँगको साथले सहजै कट्ने छ बुढेसकाल । तर, नेताहरूले देशमाथि मात्र होइन, मान्छेका जीन्दगीसँग पनि खेल्दारहेछन् । तिनै कल्पना भित्रिएपछि जीवनभर नचाहरेको अड्डा-अदालत बूढेसकालमा चहार्न विवश छन् ७५ वर्षे भीमलाल । उनीसँग विवाह गरेर जीवन सुख र आनन्दसँग जिउने सपना थियो तर पछिल्लो नौ वर्ष अड्डा-अदालतका ढोका चहार्दैमा कष्टसँग बितेका छन्, उनका दैनिकी । कल्पनाको कर्म रहेछ,अलि पैसावाल केटा फेला पारेपछि ऊसँग विवाह गरिहाल्ने । केही महिनापछि विवाह दर्ता गर्ने, अनि विवाह दर्ता गरेको एकाध महिनापछि निहुँ खोजेर सम्बन्धविच्छेद गर्ने र आधा सम्पत्ति माग्ने । यो कुनै कोरा आरोप हैन, तथ्यहरूले यस्तै बोल्छ ।
विवाह जीवन काट्नका लागि होइन । केही समय काट्ने र मुद्दा मामिला गर्ने उद्देश्य भएरै होला । विवाह भएकै दिनदेखि कल्पना विवाह दर्ताका लागि जोड दिन्थिन् । विवाह गरेको ४ महिनामै ०६६ चैत ९ मा विवाह दर्ता भयो । केही महिनापछि घरबाट रातारात हराइन् कल्पना । पछि फेला परिन् टीकाराम न्यौपानेसँग । १५ दिन छानबिनका लागि हिरासतमा राखी सरकारी वकिलमार्फत चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जरिवाना गराएर मुद्दा टुंग्याए ।
पुनरावेदनले विवाह बदर गराइदिएसँगै उनी अहिले सर्वोच्चमा पुगेकी छन् न्याय खोज्न । हेर्न बाँकी छ विवाहजस्तो पवित्र सम्बन्धलाई पैसा कमाउने माध्यम बनाउनेउपर दूधको दूध पानीको पानी छुट्याउने कसम खाएर न्यायको तराजु हातमा लिई बस्नु भएका श्रीमान्हरूले कस्तो न्याय दिनुहुन्छ ? कस्तो विवेक प्रयोग गर्नुहुन्छ ? हरेक घटनामा पुरुष मात्र दोषी हुन्छ ? वा महिला पनि दोषी हुन्छन् ? एउटा लोग्ने मान्छेले श्रीमती हुँदाहुँदै सम्बन्धविच्छेद नगरी दोश्रो विवाह गरेको खण्डमा जेल सजायँ हुन्छ तर एउटा महिला, त्यो पनि सरकारी कर्मचारीले बहुविवाह गरेको प्रमाणित भयो भने जेल जानुपर्ने कि नपर्ने ? उनीजस्ता कर्मचारीउपर स्वास्थ्यमन्त्री/ स्वास्थ्य सेवा विभागको ध्यान जाने कि नजाने ? महिला भएकै आधारमा जे गर्न पनि छुट मिल्छ ? आशा भरोसा एवं विश्वास छ सर्वोच्चका श्रीमान्हरूले विवेक प्रयोग गर्नुहुन्छ र बृद्ध भीमलालमाथि न्याय दिनुहुनेछ । तिनै कल्पनासँग विवाह गरेर मुद्दा मामिला चल्दा भएभरका सम्पत्ति सबै अदालतले रोक्का गरेको अवस्था छ ।
त्यही कारण भीमलाल पोखराको एउटा गाउँमा बस्छन्, एक्लै । छोराहरू मुख राम्रोसँग खोलेर बोल्दैनन् । उता एक जना होइन, दुई जना होइन, पुरुषका घरबार र जिन्दगीसँग खेलेर उनीहरूलाई धर्धरी रुने बनाएर अनमीको जागिर खाँदै छिन् कल्पना । यस्तामाथि कडाभन्दा कडा कारबाही होस् । अरु समयमा महिला र पुरुष समान भन्ने अनि कारवाहीको मामलामा पुरुषलाई एउटा कानुन आकर्षित हुने, महिलालाई अर्को कानुन लाग्ने नहोस् । बहुविवाह गर्नेमाथि कडा कारबाही होस् ।
– (भीमलालको साथी विनोद पुडासैनी, पोखरा, हामीले जनआस्थाबाट साभार गरेको)
Next भर्खरै विहे गरेकी काजललाई छ यस्तो रोग, म लजाउँदिन भन्दै गरिन् खुलासा